मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने व्यक्ति पनि नेपाली नै ! « Dainik Online
मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने व्यक्ति पनि नेपाली नै !
प्रकाशित मिति : श्रावण १८, २०७७ आईतबार
काठमाडौं । मलेसियामा ड्युटीमा रहेका नेपाली सुरक्षा गार्डमाथि निर्धात कुटपिट गर्ने व्यक्ति पनि नेपाली नै भएका खुलेको छ ।
नेपाली सुरक्षा गार्ड कुटिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले गरेको छानबिनका क्रममा कुटपिट गर्ने व्यक्ति पनि नेपाली नै भएका खुलेको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरसल करिब ४४ सेकेन्डको भिडियोमा एकजना व्यक्तिले ड्युटीमा रहेका सुरक्षा गार्डमाथि निर्घात कुटपिट गरिरहेका छन् । उनले मलाय भाषामा सुरक्षा गार्डलाई गाली समेत गरिरहेका भिडियोमा सुनिन्छ ।
भिडियोमै एकजना व्यक्ति (सम्वतः भिडियो खिच्ने)ले हिन्दी भाषामा ‘भयो अब छोडिदेऊ’ भनेको पनि सुनिन्छ ।
कुटाइ खाने कामदारलाई अहिले मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले आफ्नो आश्रयस्थलमा ल्याएर राखेको छ । यस्तै, कुटपिट गर्ने व्यक्तिसँग पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ ।
मलेसियामा एक नेपाली कामदारलाई कुटपिट गरेको यो दृश्य यस्तो पिडा आखिर कहिलेसम्म सरकार आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर रेमिट्यान्स पठाउँने यि नै नागरिक हुन। pic.twitter.com/lNbAC1ehlJ
— Rama Wali / रमा ओलि (@Ramawali77677) July 30, 2020
कुटाइ खाने कामदार (गार्ड)का आफन्तले नेपालबाट खबर गरेपछि दूतावासले उनलाई आश्रयस्थलमा ल्याएको हो ।
दूतावासले स्थानीय प्रहरीमा घटनाबारे प्रारम्भिक उजुरी दिइसकेको जनाएको छ । तर, त्यहाँको प्रहरीले कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन ‘औपचारिक उजुरी’का लागि आग्रह गरेका कारण सोमबार औपचारिक उजुरी दर्ता गरिने दूतावास स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आइतबार मलेसियामा सार्वजनिक बिदा हुने भएका कारण सोमबार मात्रै उजुरी दर्ता गरिने जनाइएको छ ।
दूतावास स्रोतका अनुसार सुरक्षा गार्डमाथि कुटपिट गर्ने नेपाली व्यक्ति एउटा कम्पनीमा सुपरभाइजरको रुपमा काम गर्छन् । तर, उनी गैरकानूनी रुपमा त्यहाँ बसेको पाइएको छ ।
केही समय अगाडि एउटा कम्पनीमा काम गर्दै आएका ती व्यक्ति पछि कम्पनी छाडेर अर्कोमा काम गर्न थालेका हुन् ।
मलेसियामा ‘नेपाली सुरक्षा गार्ड’माथि निर्घात कुटपिट, नेपाली दूतावासद्वारा स्थानीय प्रहरीमा उजुरी
ललितपुर महानगरमा फुटपाथमा पसल राख्न निषेध
ललितपुरको पुल्चोक, कुपण्डोल, जावलाखेल र कुमारीपाटीमा फुटपाथ पसल राख्न निषेध गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले सहरलाई
बसले स्कुटीलाई ठक्कर दिँदा एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु
बसले स्कुटीलाई ठक्कर दिँदा आज साँझ तीन जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ। आज साँझ ५
पाँचथर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले प्राविधिक शिक्षा विस्तारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी
शहीद रत्नकुमार वान्तवाको जीवनीमा आधारित ऐतिहासिक फिल्म ‘देउमाइको किनारमा’ का लेखक तथा निर्देशक प्रेम शेर्मा
नेटवर्किङ व्यापार गर्नेमाथि कडा निगरानी राख्न सांसदहरुको माग
सांसदहरुले वस्तु बिक्रीसम्बन्धी व्यवसायमाथि कडा नियमन र निगरानीको आवश्यकता औँल्याएका छन। प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य
कोरोना सङ्क्रमणसँगै बन्द रहेको यहाँको पयर्टन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन व्यवसायीले छुटको घोषणा गरेका छन्। सौराहाका
कोरोनाका कारण बन्द रहेका लहानका विद्यालय आजबाट खुले
स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्दै सिरहाका विभिन्न स्थानका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरु आजबाट सञ्चालनमा आएका
अब पीसीआर रिपोर्ट सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइने
काठमाडौं । सबै प्रयोगशालाले अब पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट सम्बधित व्यक्तिलाई दिन पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य
हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनेबारे अध्ययन समिति गठन
आज घट्यो सुनचाँदीको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
सुशान्त प्रकरण: सलमान, करण र भन्सालीसहित पाँच जनालाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश
अर्नब गोस्वामीले सलमान खानलाई थर्काएपछि..(भिडियो)